तपाइँको सदस्यता रद्द लुकाउने कुनै रणनीति होईन | Martech Zone
तपाइँको सदस्यता रद्द लुकाउने कुनै रणनीति होईन
आइतबार, अगस्त 26, 2012 आइतबार, अगस्त 26, 2012 Douglas Karr
हामी सेवाहरूको धेरै मूल्यांकन गर्दछौं ताकि हामी उनीहरूको बारेमा ब्लगमा लेख्न सक्दछौं वा तिनीहरूलाई हाम्रो ग्राहकहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामीले अधिक र अधिक हेर्नको लागि एउटा प्राविधिक सेवाहरू हो जुन तपाईंलाई सजिलैसँग खाता सुरू गर्न अनुमति दिन्छ, तर तिनीहरू यसलाई रद्द गर्ने कुनै माध्यमको अभाव छ। मलाई लाग्दैन कि यो एक परिदृश्य हो ... र यसले तुरून्त मलाई कम्पनीमा बन्द गर्दछ।
मैले आज बिहान १ 15 मिनेट खर्च गरेकै मात्र गरी। एक सामाजिक मिडिया निगरानी सेवा को एक प्रस्ताव निशुल्क परिक्षण त्यसैले मैले हस्ताक्षर गरे। करिब २ हप्ता पछि मैले ईमेलहरू पाउन शुरू गरें जसले मलाई चेताउनी दियो कि मेरो परीक्षण समाप्त भएको छ। Days० दिन पछि, मैले दैनिक ईमेलहरू प्राप्त गर्न शुरू गरें जसले मलाई मेरो सर्त समाप्त भयो र मसँग भुक्तान गरिएको खातामा अपग्रेड गर्न सक्ने लिंक रहेको बताएँ।
ईमेलको सदस्यता रद्द गर्नुहोस् मलाई खाता लगइन पृष्ठमा ल्याईयो। GRrr ... सदस्यता रद्द गर्न लगइन गर्न मेरो अर्को पाल्तु पिभ हो। किनकि जस्तोसुकै भए पनि लगईन गर्दै थिएँ, मैले खाता रद्द गर्ने सोच लिएँ। म खाता विकल्प पृष्ठमा गएँ र केवल विकल्पहरू फरक अपग्रेड विकल्पहरू थिए - रद्द विकल्प छैन। राम्रो प्रिन्टमा पनि।
अवश्य पनि, समर्थन अनुरोध गर्ने कुनै माध्यम थिएन। केवल एक FAQ। FAQ हरूको द्रुत समीक्षा र खाता रद्द गर्ने बारे कुनै जानकारी छैन। धन्यबाद, FAQ हरूको आन्तरिक खोजीले समाधानको प्रस्ताव गर्‍यो। लिंक रद्द गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता प्रोफाइल भित्र अस्पष्ट ट्याबमा गाडिएको।
यसले मलाई अखबारको उद्योगको सम्झना गराउँदछ ... जहाँ तपाईं प्रायः अनलाइन साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईंको सदस्यता रद्द गर्नको लागि तपाईले ग्राहक सेवा प्रतिनिधिलाई कल गर्न पर्खनु पर्दछ। र ... यसलाई रद्द गर्नुको सट्टा, तिनीहरूले तपाईंलाई अन्य सदस्यता विकल्पहरू र उपहारहरू प्रस्ताव गर्ने प्रयास गर्छन्। म फोनमा यी व्यक्तिहरूसँग छु जहाँ म यति विचलित भएको छु कि मैले भर्खर सम्म "मेरो खाता रद्द" गरें र उनीहरूको पालना नगरेसम्म।
मान्छेहरू, यदि यो तपाईंको हो भने अवधारणा रणनीति, तपाइँले केहि काम गर्नु भएको छ। र, तपाईं आफ्नो उत्पादन वा सेवाको साथ समस्याको मास्क गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको वास्तविक ग्राहक प्रतिधारणलाई अस्पष्ट गरेर। बन्द गर! एक उत्पादन वा सेवा रद्द गर्नु केवल एकको लागि साईन अप गर्न जत्तिकै सरल हुनुपर्छ।
किन तपाईंको अर्को व्यवसाय कम्प्युटर एक म्याक हुनु पर्छ
अवलोकनकर्ताहरू ब्राउज गर्नुहोस्, चेक आउट गर्नुहोस्, वास्तविक समयमा खरीद गर्नुहोस्!
स्कट वाइडन किवोविट्स
अगस्ट 27, 2012 बेलुका 7:26 बजे
त्यो देख्दा मलाई धेरै दुख लाग्छ। एकचोटि मैले खराब सदस्यता रद्द गर्ने लिङ्कको साथ ईमेल प्राप्त गरेपछि म यसलाई स्प्यामको रूपमा चिन्ह लगाउँछु र यदि यसले मद्दत गर्दैन भने, तिनीहरूलाई स्थानमा मेटाउनको लागि नियम सिर्जना गर्नुहोस्।